भैरहवाको ग्लास हाउसमा भिषण आगलागी, २० दमकलको प्रयोग – PathivaraOnline
Home > समाचार > भैरहवाको ग्लास हाउसमा भिषण आगलागी, २० दमकलको प्रयोग
Poonam July 11, 2021 समाचार	0
काठमाडै । रुपन्देहीको भैरहवा स्थित एक ग्लास हाउसमा भिषण आगलागी भएको छ । आ गलागी निभाउन २० वटा दमकलको प्रयोग भएको छ । शनिवार राति सुरु भएको आगलागी अहिले पनि पूर्ण रुपमा निभेको छैन । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ नारायण पथमा भएको आगो पूर्ण रुपमा निभेको भने छैन।
आगलागीबाट दुई तल्ले घर ध्व स्त भएको छ। प्लाइबोर्डको ठूलो गोदाम रहेको घरमा विद्युत सर्किट सर्ट भएर आ गोलागी हुँदा सबै प्लाइबोर्ड न ष्ट भएको छ। माथिल्लो तल्लामा सोही पसलधनीको परिवार बस्दै आएकोमा निजहरुको सकुशल उद्धार गरिएको थियो। घरमै रहेको नगद, मोटरसाइल, लगाएत गरी करिब ५ करोड बढीको क्षति भएको घरधनी सुन्दर अग्रहरीले जानकारी दिए।
नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाढी पहिरोकाे यस्तो बितण्डाः कहाँ कति क्षति? विस्तारमा हेर्नुस्
भदौ २९ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशि अनुसार तपाइँहरकाे भाग्यफल!
दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन, पुरा हेर्न फोटोमा किलिक गर्नुहोस्